ERW ígwè anwụrụ, na-ekpo ọkụ tinye galvanized ígwè anwụrụ, LSAW ígwè anwụrụ-YuantaiDerun Group
Brand isi nke Square tube na CHINA
CHINA'S SQUARE TUBE NDLỌ ỌRND ỌRND CHINA
NKWUKWU NKE GROUP
Mmemme maka ọha ọha
ERW WELED PIPE
ỌKPARA NKE AKWERE AKWỤKWỌ
Igwe anaghị agba nchara tub / eriri igwe
AKWỤKWỌ ỤZỌ & OKTOBA
OZI NA AJỤJỤ
Njikwa ịdị mma
Nkwado ihe onwunwe
Njikọ siri ike
100% nnabata na ụkpụrụ
Ọrụ ngwa ngwa
Nzaghachi ngwa ngwa na 30 nkeji
ndị bụ YuanTaiDeRun
KWESO ỌRỤ NKE ỤBỌCHỊ ỤBỌCHỊ
Tianjin Yuantai Derun Pipe Manufacturing Group Co., Ltd., nke e guzobere na March 2002 ma sitere na Tianjin Yuantai Industrial na Trading Co., Ltd, dị na nnukwu ọkpọkọ-na-arụpụta isi-Daqiuzhuang mpaghara mpaghara mpaghara na Jinghai Tianjin nke dị nso na China National Highway 104 na 205 na ọ bụ naanị 40 km tere aka na Tianjin Xingang Port. Ọnọdụ obodo mara mma na-akwado nkasi obi maka njem ụgbọ mmiri na nke ime obodo.
YuanTaiDeRun wuru na 2002
Ndị na-emepụta 500 kacha elu nke China
5 nde tọn
Ike imepụta ya karịrị tọn 5 nde
Ndị otu anyị na-arụpụta ụdị dị iche iche nke ọkpọkọ nchara, ọtụtụ ngwa dị iche iche, mmesi obi ike, mma nke mbụ
2 inch id square nchara tubing soplaya
Black Carbon Square tube Nha
ASTM A36 na-ekpo ọkụ akpọrepu carbon ígwè tube
MS-Square-Pipe-Bututu - 3-6mm
Ngalaba ERW oghere si China
YuantaiDerun Structural oghere ngalaba
Iron MS Now oghere oghere Pipe
1 ″ x 1 ″ .120 Carbon Steel Square tube
Oyi igwe akpọrepu gburugburu
Oyi akpọrepu akụkụ anọ Ọkpọkọ
EN10210 EN10219 rektangulu tube
20 afọ nke ígwè anwụrụ n'ichepụta ahụmahụ
Otu n'ime ndị na-edepụta ụkpụrụ ọkọlọtọ mba
Ndị kasị ibu square na akụkụ anọ tube n'ichepụta ụlọ ọrụ
Na mgbakwunye na isi ụlọ ọrụ dị na Tianjin, e nwere ọtụtụ ndị enyemaka na alaka na Tangshan na ebe ndị ọzọ.
AKỤKỌ YUANTAIDERUN TANGSHAN
YUANTAIDERUN NO.4 AKỤKỌ
YUANTAIDERUN NO.3 AKỤKỌ
Ulọ ọrụ na azụmahịa nke YUANTAI
YUANTAI DERUN GROUP HEADQUARTERS ULỌ
oru ngo anyi
Ọdọ mmiri Hong Kong-Zhuhai-Macao
Hong Kong Zhuhai Macao Bridge bụ àkwà mmiri na ọwara mmiri na -ejikọ Hong Kong, Zhuhai na Macao na China. Ọ dị na mpaghara oke osimiri Lingdingyang nke Pearl River Estuary na Guangdong Province. Ọ bụ mpaghara mgbanaka ndịda nke nnukwu ụzọ mgbaaka na mpaghara Pearl River Delta.
Ebe egwuregwu Bird's Nest
Ogige egwuregwu mba (Nest Nnụnụ) dị na ndịda etiti mpaghara Beijing Olympic Park. Ọ bụ ama egwuregwu ama ama maka egwuregwu Olympic nke Beijing 2008. Ọ na -ekpuchi mpaghara hekta 20.4 ma nwee ike ịnabata ndị nkiri 91000. Mgbe egwuregwu Olympic gasịrị, ọ ghọrọ ụlọ egwuregwu ama ama na ihe nketa Olympic na Beijing.
Ebe a na -egwu mmiri nke mba, nke a makwaara dị ka "mmiri mmiri" na "ice cube", dị na Ogige Olympic nke Beijing. Ọ bụ isi natatorium nke Beijing wuru maka Egwuregwu Olimpik nke afọ 2008 na otu n'ime ụlọ ama ama egwuregwu Olympic 2008 nke Beijing.
Ọdụ ụgbọ elu HK
Ọdụ ụgbọ elu Hong Kong, nke dị na Chek Lap Kok, agwaetiti Lantau, Hong Kong, China, kilomita 34 site na mpaghara mepere emepe, bụ ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke 4f. Ọ bụ otu n'ime ọdụ ụgbọelu kacha ekwo ekwo n'ụwa. Ihe karịrị ụlọ ọrụ ụgbọ elu 100 na -arụ ọrụ ebe a, na -ebute ọkwa nke ise na oke okporo ụzọ ndị njem na nke mbụ na ibu ibu maka afọ iri na asatọ n'usoro
National aterlọ ihe nkiri
National Grand Theatre nke China bụ otu n'ime "nlegharị anya iri na isii nke Beijing". Ọ dị na mpaghara ọdịda anyanwụ nke Tiananmen Square yana ọdịda anyanwụ nke nnukwu ụlọ ndị mmadụ na etiti Beijing. Ihe mejupụtara ya bụ nnukwu ụlọ, okpuru mmiri dị n'okpuru mmiri, ebe a na -adọba ụgbọala n'okpuru ala, ọdọ mmiri na oghere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị n'akụkụ ugwu na ndịda.
N'ịbụ nke e wuru n'elu ihe karịrị nde square iri na otu nke ala mara mma, ụlọ ime obodo Dubai nwere ọtụtụ mbara ala na ubi, ụzọ mgbago na mpaghara ọha sara mbara. Ntughari n'ime obi obodo ahụ, a na -eji ihe ịchọ mma gburugburu ugwu ugwu Dubai gbaa gburugburu golf oghere oghere 18.
Ụgbọ elu KUWAIT
Ọdụ ụgbọ elu mba Kuwait bụ ọdụ ụgbọ elu dị na Farwaniya, Kuwait, kilomita 15.5 (kilomita 9.6) ndịda Kuwait City, na -ekpuchi mpaghara 37.7 square kilomita (14.6 square kilomita). Ọ bụ ọdụ ụgbọ elu Al Jazeera na Kuwait.
Nsọpụrụ ndị China
Ụlọ elu Beijing CITIC, nke a makwaara dị ka Zhongguo Zun, bụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ nke China CITIC Group. Ọ dị na ngọngọ z15, isi mpaghara mpaghara azụmahịa etiti. Site n'ogologo ya dị mita 528, ala 108 dị n'elu ala na ala 7 n'okpuruala, ọ nwere ike ịnabata mmadụ 12000 ka ha rụọ ọrụ, yana ngụkọta ngụkọta nke mita 437000. Ezubere ihe owuwu ụlọ ahụ ka ọ na -eitationomi arịa emume ochie "Zun". N'ime, enwere igwe mbuli elu ụwa mbụ nwere ịdị elu karịa mita 500, nke a na -ahụta dị ka "ụlọ iri kacha elu nke China n'oge a".
AKWUKWỌ SINGAPORE GOOGLE
Nke a ga -abụ nnukwu ụlọ ọrụ teknụzụ data nke atọ na Singapore ma ga -adị na Jurong West dị n'okporo ụzọ site na ụlọ abụọ ya ndị ọzọ.
Dubai Hills Estate bụ otu n'ime mmepe ọhụụ kachasị ama ama na Dubai. N'agbata okporo ụzọ abụọ nke Al Khail Road na Mohammed Bin Zayed Road, Dubai Hills Estate bụ nnukwu ebe obibi na mmepe ndụ nke gụnyere ụlọ ezumike, ụlọ dị ala na ụlọ obodo. Ọ bụ akụkụ nke mbụ na nnukwu ọrụ Mohammed Bin Rashid City, nke nwetara moniker nke 'obodo n'ime obodo' nke ọma n'ihi oke mmepe ahụ.
Isi obodo nchịkwa ọhụrụ nke Egypt dị 45km n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Cairo n'ụzọ na -aga n'ọdụ ụgbọ mmiri Obodo Suez. Ihe oru ngo a kwesiri inye ọtụtụ puku ọrụ ma kpalite akụ na ụba. Mgbe emechara isi obodo ọhụrụ a, a ga -anabata ndị bi nde mmadụ ise na -edozi nsogbu mkpọchi na -adịghị ala ala na isi obodo Cairo ugbu a. N'okpuru bụ usoro iheomume isi ọrụ nchịkwa ọhụrụ nke Egypt yana ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ọrụ ahụ site na mbido ruo ụbọchị ugbu a.
ỤLỌ EGYPT GREEN
Nnukwu oru ngo nke griin haus nke gọọmentị Egypt na -eme bụ mmụba dị mma n'akụkọ ihe mere eme nke ọrụ ugbo na mba ahụ n'ihi na ọ ga -arụ ọrụ dị mkpa n'inweta nchekwa nri maka mba Arab kachasị nwee ọnụ, ndị ọkachamara Egypt kwuru.
Tianjin yuantaiderun steel pipe group par ...
Ndị otu Tianjin yuantaiderun na -arụ ọrụ dị iche iche ...
Ngosiputa | YUANTAI & COSTA RIC EX ...
Oge ezumike ezumike nke 2018
Anyị bụ ọkachamara
Na teknụzụ siri ike, ụlọ nyocha na mmepe
90 ụbọchị Nkwa dị mma mgbe ngwongwo bịarutere
Afọ 20 nke ahụmịhe n'ichepụta ọkpọkọ nchara dị ukwuu
Anyị ga - enweta gị ọnụego n'efu na - ahazi ọrụ gị n’ụbọchị na oge kacha arụ ọrụ maka gị.
Debanye aha maka akwụkwọ akụkọ anyị ka ị nwee ọfụma na nkwalite, ego, ire ahịa na onyinye pụrụ iche.
Gbasara anyị Akụkọ Kpọtụrụ Ajụjụ Ọrụ Privacy Notice